Ukuxoxisana noRafael Santandreu, isazi sokusebenza kwengqondo nomlobi we "The glasses of injabulo" | Izincwadi Zamanje
UCarmen Guillen | | Izingxoxo, Abalobi, Literatura
Namuhla sikulethela ingxoxo noRafael Santandreu, isazi sokusebenza kwengqondo nomlobi we "Izibuko zenjabulo" y "Ubuciko bokungakhathazi impilo". Lesi sakamuva saba yimpumelelo enkulu yokuthengisa ngonyaka odlule eSpain esigabeni se- «non-fiction» futhi sicabanga ukuthi nge "Izibuko zenjabulo" into efanayo izokwenzeka. Sikushiya ngamazwi akhe.
KUYA KU: Okokuqala, sithanda ukukubonga ngokusinika isikhashana sakho ukwenza le ngxoxo, uRafael. Ungomunye wodokotela bengqondo abaziwa kakhulu eSpain namuhla, hhayi ngezokwelapha zakhe kuphela kepha nangempumelelo yencwadi yakhe ngonyaka owedlule "Ubuciko bokungakhathazi impilo", omunye wabathengisi abakhulu uma kungenjalo kakhulu esigabeni se- "non-fiction" eSpain. Kungani ucabanga ukuthi ukushicilelwa kwakho kube yimpumelelo engaka?
I-RS: Incwadi yami yokuqala iphumelele kakhulu ngoba iyasebenza impela. Angizithandi izincwadi zokuzisiza ngoba ngizibheka "njengeqoqo lamagama amahle", kodwa hhayi kakhulu. Uhlobo lwengqondo engilwenzayo lubizwa ngokuthi "ukwelashwa kwengqondo" futhi lusekelwa izifundo ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili ezishicilelwe kumajenali esayensi. Iningi labafundi bami alithenganga nje ikhophi yeThe Art of NOT Making Your Life Bitter, kodwa 10. Ngokubona ushintsho olwenzeka kubo, balunika imindeni nabangane.
KUYA KU: Futhi uthathe isinqumo sokungagcini kulokhu kubhala futhi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ukhiphe incwadi yakhe yesibili emakethe yokushicilela, ayibiza "Izibuko zenjabulo. Thola amandla akho angokomzwelo ". Ngokwami ​​angikaze ngibe nethuba lokuyifunda okwamanje. Unganginika isifinyezo esifushane ngalokho engingakuthola encwadini?
I-RS: Uzothola okhiye bokushintsha isimilo sakho: ukuze uqine ngokomzwelo njengoba kunjalo, isibonelo, uStephen Hawking, usosayensi ohamba ngesihlalo esinamasondo. Uma ushintsha ngokuphelele inkhulumomphendvulwano yakho yangaphakathi, imizwa yakho iyashintsha. Kuzofanele uzijwayeze, wenze isilinganiso sehora lomsebenzi wesikole ngosuku, kepha umklomelo inkululeko nokugcwaliseka.
KUYA KU: Ngabe ucabanga uRafael ukuthi abantu abakwazi ukubona injabulo emininingwaneni emincane yingakho isihloko sencwadi?
I-RS: Ukubona ubuhle bezinto ezincane kungumphumela wempilo enhle yengqondo. Lapho sibi asizibongi izimangaliso zosuku nosuku. Kodwa isihluthulelo saleyo mpilo yengqondo ukulwa "nokufunwa ngokweqile": zitshele: "Kumele ngenze konke kahle noma kahle kakhulu noma ngiyisibungu esinegazi sohlobo olubi kakhulu!". Uma uyeka ukuzinika imivimbo yengqondo, uqala ukuphefumula kalula futhi wehlise umoya… Yilapho ukuphulukiswa kuqala khona.
KUYA KU: Kumele ngivume ukuthi ngiyamlandela ohlelweni Kubo Bonke 2, eyethulwe nguMarta Càceres noJuanjo Pardo, futhi ngamlalela uma ngicabanga, uma ngingathola ithuba lokukhuluma noRafael Santandreu ngelinye ilanga (ufisa ukunikezwa, ngiyabonga Genie!) Ngingambuza ukuthi ucabangani ngezidingo eziyisisekelo eziyi-7 ezichazwe nguMaslow, ngoba ukholelwa ukuthi abantu "badinga" ngaphezu kwezisekelo. Yini ongitshela yona ngalokhu?
I-RS: IPhiramidi lika-Abraham Maslow, isazi sokusebenza kwengqondo esidumile ngeminyaka yama-50s, lithi abantu bakhuphuka besuka "ezidingweni" njengoba behlanganisa izisekelo. Isibonelo, ngemuva kokudla nokuphuza, baqala ukuhalela ukuzijabulisa. Ngemuva kwalokho, umsebenzi omnandi. Lapho-ke, uthando lweqiniso ... Ngingagcizelela ukuthi akumayelana "nezidingo" kepha "ngezifiso" "Izidingo" zomuntu zingukudla neziphuzo kuphela. Okunye njalo "kuyizifiso", okungukuthi, izinhloso ezingagcwaliseka noma ezingafezeki. Uma kungenjalo, nathi singajabula kanjalo. Ukuze uqine ngokomzwelo kufanele ulawule "isidingo", ukuthambekela kobuhlanya kokuguqula "okufunayo" kube "izidingo eziphelele". Mina kuphela "ngidinga" isisekelo sephiramidi kaMaslow, ukudla, kepha hhayi okunye. Angidingi umsebenzi ovikelekile, angidingi umaqondana, angidingi abangane ... Ngingedwa, ensimini, ngezinto eziyisisekelo, ngingajabula mega.
KUYA KU: Ngifunde ndawana thile (uma ngikhuluma iqiniso angikhumbuli ukuthi iyiphi) esizoyazi imininingwane yencwadi ayibhalayo njengamanje. Iqiniso? Ngabe uRafael Santandreu uzoshicilela incwadi yesithathu?
I-RS: Ngiku. Yincwadi ezochaza ukuthi ungaqina kanjani emoyeni kepha kulokhu emazingeni aphezulu. Lokho wukuthi, ukuhlakanipha okungokomzwelo okuningi kangangokuba ukuthola umsebenzi owufunayo kungumoya; ukuthi ukudlala ngothando kulula kakhulu, ngisho nasezinganeni. Ngoba kuyiqiniso ukuthi ukuhlakanipha okungokomzwelo okuphezulu kukunika ithuba lokuncintisana ngobulwane ngoba bonke abantu bayabulala: banokwesaba okukhubazayo cishe kuzo zonke izindawo zempilo yabo.
KUYA KU: Angikwazi ukuzibamba ngibuze umbono wakho ngencwadi yemfashini nakwibhayisikobho, "Amashumi amahlanu amathunzi empunga", lapho kuvela khona nesazi sokusebenza kwengqondo. Ufundile incwadi noma uyibonile i-movie? Ucabangani? URafael Santandreu, isazi sokusebenza kwengqondo, wayengamphatha kanjani uMnu.
I-RS: Angazi okuningi ngaleyo ncwadi, empeleni. Kuphela ukuthi umlingiswa oyinhloko uthanda i-sado nokuthi ekugcineni into iphela njengendaba yothando. Kumuntu othanda isado, angisho lutho ngoba ngumsebenzi osemthethweni njenganoma yimuphi. Mayelana nomqondo wokuthi uthando lwezithandani lungumhlengi omkhulu, akukho hlaya. Uthando lwezithandani ludlulele. Okuqine ngempela uthando olubhekiswe emhlabeni nakwabanye, ngokujwayelekile.
KUYA KU: Futhi ukubuyela ezindabeni eziningi zemibhalo, futhi njengombuzo wokugcina, iyiphi incwadi noma izincwadi uRafael Santandreu azijabulele kakhulu? Yiziphi izincwadi ezingeke zilahleke kumtapo wezincwadi wakho?
I-RS: Ngizokuncoma izincwadi ezintathu kimi eziphakeme kakhulu emibhalweni: “Emgwaqweni”, “iLysergic acid punch” ne “Dispatches”. Bangamagugu ezincwadi zesimanje zaseMelika, kepha futhi, bachaza izehlakalo zangempela ezihlobene nokugcwaliseka komuntu siqu, izifunda zokwazi, uthando, impilo nokufa. Ngaphezu kwalokho, bobathathu balandela inkambo yefilosofi nobuhle. Zifana nempophoma kusukela ababhali bathonywe mhlawumbe kusuka kuThe Catcher in the Rye nguSalinger.
Futhi, ngiyabonga Rafael ngale ngxoxo futhi ngiyabonga nangezeluleko neminikelo asinika yona njalo ngesonto ePara Todos la 2. Sanibonani!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » Ukuxoxisana noRafael Santandreu, isazi sokusebenza kwengqondo nomlobi we "The glasses of injabulo"